POLISY VAVY NAHAVANON-DOZA : Onitra 12 tapitrisa Ariary no nangatahin’ilay mpiasany
Niverina any am-ponja ilay Polisy vavy tompon’antoka tamina habibiana nanjo ny mpiasa lahiny tao an-trano. 17 mars 2017
Fantatra fa notondrahiny tamin’ny rano mangotraka io mpiasany io, ka naratra mafy. Nahazo fahafahana vonjimaika kosa ny lehilahy iray voalaza ho mpiray tsikombakomba taminy tamin’ity raharaha ity.
Naharitra minitra maromaro no nifandahatra teo anoloan’ny Fitsarana izy mianadahy ireto. Taorian’ny fivoahan’ny didim-pitsarana dia naverina any am-ponja ilay Polisy nanao herisetra, miandry ny fotoam-pitsarana ny 20 avrily ho avy izao. Ankilan’izay nangataka onitra mitentina 12 tapitrisa Ariary kosa i Naivo, ilay tovolahy niharan’ny herisetra mihoapampana ary mbola manaraka fitsaboana hatramin’izao.
Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana, dia niaiky ny heloka vitany ilay Polisy vavy, voalaza ihany koa fa nifona tamin’ilay mpanampy an-tranony izy manoloana ny habibiana rehetra vitany ary nanampy tamin’ny fitsaboana sy ny fividianana fanafody ihany koa. Nandray ny fifonany ity naratra kanefa kosa tsy nanatsoaka ny fitoriana nataony. Hatrany amin’ny 85%-n’ny vatan’i Naivo no nitsovaka tanteraka vokatry ny fahamaizany tamin’ny alalan’ilay rano mangotraka be natondraka taminy.
Raha tsiahivina, dia nofatorana tsy navela nihetsika ny tenany ary tamin’io no nanondrahana azy ny rano mangotraka.
Nametraka fitoriana avy hatrany ilay tovolahy mpanampy an-trano, taorian’ny zavatra nihatra taminy ny faramparan’ny volana febroary lasa teo iny.